Baydhabo : HN ;–Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud ayaa dhawaan la filaya inuu booqasho ku tago magaalada Baydhabo oo saldhig u ah maamulka Koonfur-galbeed Soomaaliya.
Safarka waxaa la sheegay inuu la xiriiro sidii uu madaxweynaha uga qayb-gali lahaa munaasabad lugu soo bandhigayo ciidamo ka mid ah noqon doona militeriga Soomaaliya,kuwaaso qayb ka ah qorshaha isku dhafka ciidamada.
Waxaa kalo magaalada Baydhabo ka socda xulista xildhibaannada baarlamaanka maamulka Koonfur-galbeed,kuwaaso la sheegay dhawaan in la soo dhammeystirayo.
Baydhabo waxaa ku sugan xubno ka mid ah guddiga isku dhafka ciidamada militeriga Soomaaliya,kuwaaso ku howlana diyaarinta ciidamada gobollada ee ka mid noqonaya militeriga dalka.
Booqashada madaxweynaha waxaa la filaya inay maanta u billaabato,ammaanka magaalada Baydhabo ayaana si aad ah loo adkeeyay, waxaana lagu arkayaa waddooyinka waaweyn ee magaalada ciidamo si aad u feejigan oo xaqiijinaya ammaanka.